Kwụsị izopụ ndị ahịa gị
Kwụsị izoro ndị ọbịa gị
Monday, September 13, 2010 Sunday, October 4, 2015 Michael Reynolds
Ọ ka na-eju m anya ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ezo ndị ahịa ha. Anọ m na-eme nyocha n'izu gara aga na ndị mmepe ngwa ngwa iPhone n'ihi na enwere m onye ahịa ọ bụla chọrọ ngwa iPhone. Ajụrụ m ụfọdụ ndị na Twitter. Douglas Karr nyere m ụfọdụ ndị na-ezigara na m makwaara banyere otu ntụgharị okwu site na mkparịta ụka gara aga na enyi ọzọ. Agara m na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ atọ dị iche iche wee nwee nkụda mmụọ ozugbo.
Companylọ ọrụ ọ bụla nwere ma ọ dịkarịa ala nwere ebe nrụọrụ weebụ ma ha niile na-edochaghị anya, na-adịchaghị, na-agwụ ike, ma ọ bụ niile dị n'elu. Ha ekwughị n'ụzọ doro anya "anyị na-eme ngwa iPhone" ma gosipụtaghị ọrụ ọ bụla gara aga ma ọ bụ nseta ihuenyo.
Ọ bịara dị njọ karịa mgbe m gara na ibe ịkpọtụrụ ha. Ahụghị m nọmba ekwentị, adreesị, ma ọ bụ ụfọdụ ụfọdụ ọbụna adreesị ozi-e. Imirikiti nwere ụdị kọntaktị dị mfe.
Ọ bụ ezie na edejupụtara m fọm ndị ahụ, ana m echegbu onwe m. Ndi ndi ulo oru a ziri ezi? Enwere m ike ịtụkwasị ha obi na ego onye ahịa m? Hà ga-arụ ezigbo ọrụ? Onye ahịa m chọrọ onye mpaghara - ha nọ na Indianapolis?
Onye ahịa m bụ ụlọ ọrụ na-arụpụta ọtụtụ nde dollar na ọ dị m mkpa inwe ike iji aka na-atụgharị ha na onye nwere obi ike. Ruo ugbu a ejighi m n'aka ma achọtala ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Mgbe ahụ, enwetara m ozi ọzọ na Twitter si Paula Henry. Ọ gwara m ụlọ ọrụ. Mgbe m gara na websaịtị ụlọ ọrụ ahụ, erere m. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Ha nwere a mara mma website nke ahụ na-eme ka ha dị ka ezigbo ụlọ ọrụ
Ha gosipụtara n'ezie nseta ihuenyo nke ọrụ gara aga
ha kwuo hoo haa ihe ha na - eme: “Anyị na - etolite ngwa iPhone”
Ha bụ nọ n'ọrụ na Twitter ma gosiputa mkparita uka ha na Twitter na webusaiti (a gha m achota ha igwa ha okwu)
Ibe kọntaktị ha nwere adreesị ozi-e, adreesị anụ ahụ, na nọmba ekwentị
Na nkenke, ụlọ ọrụ ahụ mere ka ọ dịrị m mfe ịtụkwasị ha obi. Akpọrọ m ma hapụ ozi olu ma ana m akpọghachi azụ n'ime otu awa. Ajụrụ m ụfọdụ ajụjụ ma mụtakwuo banyere ọrụ ha gara aga. M ga-eso ha rụọ ọrụ ugbu a iji zụlite ngwa iPhone maka onye ahịa m.
Ihe oyiyi ị na-eweta n'ịntanetị, ozi ị na-ekwurịta, na ịdị mfe nke ịkpọtụrụ gị na-eme ndị ahịa gị nnukwu ọdịiche. Mee ka ọ dịrị gị mfe iji azụmahịa na.
Tags: kọntaktịkọntaktị kọntaktịkọntaktị pageezopaula henry
Vimeo nwetara Video Market Share: Okporo ụzọ Up 269%
Nyocha Blog: Dave Woodson, Social Media Consultant